Iibhayibhile ziibhulukhwe ekuncanyathiselwe kuzo ibhibhi egubungela indawo ephezulu yomzimba ngaphambili ukusuka esinqeni. Oku kuhlala kubanjelwe endaweni enemitya emibini yamagxa. Ii-Dungarees zazenziwe njengeebhulukhwe zomsebenzi. Ayisebenzi kuphela kuba ikhusela umzimba kunye neempahla, kodwa ihlala ikhululekile.
Kwizigaba eziphindaphindayo, i-dungarees, ekwabizwa ngokuba yi-Blaumann okanye i-fitter suit, nazo ziqwalasele ngokulinganayo kwihlabathi lefashoni: amaxesha ngamaxesha, iibhulukhwe zebhibhi ziba sisixhobo sefashoni kwaye zenza indlela yazo kwiikati zendlela yefashoni.
Kodwa iibhibhi nazo zinokudlala indima kwinqanaba elihluke ngokupheleleyo, kumaphupha ethu. Kodwa yeyiphi intsingiselo efuziselayo enayo apha?
1 Uphawu lwephupha «isigcina-sifuba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isigcina-sifuba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isigcina-sifuba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isigcina-sifuba» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, isigcina-sifuba luphawu lokufika. umsebenzi wezandla nokubulaleka. Nabani na onxibe ibhibhi ephupheni akanako ukufezekisa okuninzi ebomini ngaphandle komzamo wakhe. Uhlalutyo ngokubanzi lwephupha luthatha ukuba ingubo ephupheni, ke, nayo ininzi kakhulu uqeqesho ngakumbi kwaye ubize isenzo.
Umbono wamaphupha wenkawu wona uthembisa ngale ndlela ngokokutolikwa kwephupha. ukwaneliseka. Imeko yephupha kufuneka isuse inkohliso yobutyebi obukhulu xa uphupha, kodwa kwangaxeshanye kufuneka ibonise ukuba umsebenzi olungileyo ukhuselekile kuye. Umntu olalayo uya konwaba kokubini emsebenzini nakubomi babucala.
Ngamanye amaxesha, intsingiselo "yesigcina-sifuba" isimboli yephupha inokuxhomekeka ngokuthe ngqo kumntu ekubhekiswa kuye kunye neemeko zokuphila kwakhe. Ke ukuba, umzekelo, uhlala uhlala unxibe iimpahla zeshishini ezifanelekileyo ebomini bakho bemihla ngemihla, kodwa ngequbuliso uphupha unxibe isuti yoomatshini, usenokuyidinga. Ixesha liphelile. Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umntu olalayo ulangazelela ukuphumla engqondweni yakhe. Ufuna ukwaneliseka emsebenzini wezandla kwaye, ngenxa yoko, ukwahlukana okwethutyana kwimithetho engqongqo yokuziphatha kwimeko yakho yobungcali.
Kwiphupha labasetyhini, nangona kunjalo, umfanekiso wephupha wesigcina-sifuba ubhekisa kwi amaphepha angamadoda yobuntu bakho. Iphupha linqwenela amandla ngakumbi, amandla, kunye nefuthe. Ufuna ukuthathelwa ingqalelo kunye noluvo lwakhe. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba umntu oleleyo unxibe i-classic jumpsuit kwimeko yephupha.
Uphawu lwephupha «isigcina-sifuba» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokusebenza kwengqondo kuhlalutyo lwamaphupha, izigcina-sifuba zikufanekisela ephupheni. ukhuseleko, ekhusela iphupha kwiimpembelelo zangaphandle. Oku kuthetha ukuba xa umntu ephupha uphawu "lwesigcina-sifuba", iingxaki azisondeli kakhulu. Ngale ndlela anokuzihlalela ngaphandle kwemiceli mngeni eyahlukeneyo, umsindo kunye nobunzima kubomi bemihla ngemihla.
Kwelinye icala, iphupha apho umntu oleleyo enxibe iiovaroli, nangona bonke abo bakhoyo benxiba ngokuhomba nangobukhazikhazi, Kunzima ukuziqhelanisa gqiba. Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha kuthatha ukuba imeko yephupha kwezi meko ibonisa ukuba iphupha linokuvavanya imeko-bume yalo ngobunzima kuphela. Ngenxa yoko, unokudibanisa kuphela kwimeko yezentlalo ngobunzima okanye nokuba angadibanisi konke konke.
Uphawu lwephupha «isigcina-sifuba» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, umfanekiso wephupha "isigcina-sifuba" ikwangumqondiso wokhuseleko. Apha oku kuthetha enye ukukhuselwa ngokomoya, ekhusela amaphupha kwiimpembelelo ezimbi zehlabathi kwaye ivule amehlo akho kwinto ebalulekileyo.